Tuesday May 21, 2019 - 21:50:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kumanaan katirsan ciidamada dowladda Mareykanka ayaa lagu xoojiyay saldhigyada dowladaasi ay ku leedahay dhowr wadan oo ay kamid yihiin Baxreyn,Qadar iyo Kuweyt waxaana ladareemayaa dhaq dhaqaaqyo melleteri.
Wararka ka imaanaya wadanka Baxreyn ayaa sheegaya in markabka diyaaradaha dagaalka xambaara ee lagu magacaabo Abraham lincoln uu gaaray biyaha gacanta carabta waxaana socda dhoollatusyo melleteri oo ciidamada Mareykanka ay la sameynayaan kuwa dowladaha dabadhilifyada khaliijka.
Bayaan kasoo baxay taliska 5aad ee ciidamada badda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay bilaawdeen dhaq dhaqaaqyo lagu sugayo biyaha Badda Carabta si looga feejignaado khatar ka timaad dhanka dowladda shiicada Iiraan.
dhoolatusyada ay sameynayaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladaha isku magacaabay Khaliijka ayaa yimid xilli xukuumadaha washington iyo Dahraan ay sheegeen in xilligan aysan diyaar u aheyn dagaal melleteri oo labada dhinac dhaxmara.
Isbuucii lasoo dhaafay weerar lagu waxyeeleeyay illaa afar markab oo dowladda sacuudiga leeyahay ayaa ka dhacay biyaha gobolka alfujeyrah ee wadanka imaaraatka carabta wixii xilligaas ka dambeeyay ayay aala sacuud iyo xulufadeeda waxay muujinayeen walaac ay ka qabaan weeraro uga yimaad Iiraan